World – Live Nepal News
माघ २६ गते ‘टुडिखेल’ जाऔ… भगवान ‘बुद्ध’ को जन्मभुमी ‘नेपाल’ हो भनौ
यही माघ २७ गते पप स्टार धीरज राइ अनी कुशल पत्रकार रबि लामिछाने बाट टुडीखेल मा गिनिज वोर्ल्ड रेकड (Guinness World Record )मा भगवान बुद्ध नेपाल मा जन्मेका हुन भनेर लेखाउने प्रयास हुँदैछ . बिषेश कुराकानीमा धिरज राइ हुनुहुन्छ ।सबैलाई थाहा छ गौतम बुद्ध नेपाल मा जन्मिएका हुन् तर पनि …
एजेन्सी । मानिसहरु विशेष गरी प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्नको लागि तथा नयाँ ठाउँहरुको अनुभव लिनको लागि यात्रा गर्छन् । थाईल्याण्डमा एक यस्तो शहर छ जुन सेक्स टुरिज्मको नामले चिनिन्छ । किनकी यो शहर बेश्याबृत्तिको लागि निकै प्रख्यात छ । यस शहरको नाम हो, पाटाया । थाईल्याण्डमा २८ लाख भन्दा बढि यौनकर्मी …
मरुभूमीमा स्वर्गजस्तो शहर
हामी रेगिस्तानको नाम सुन्‍नेबित्तिक्कै बालुवै वालुवाको ठाउँ भनेर सम्झिन्छौ। तर सभ्यताको विकाससँगै मरुभूमिमा पनि हरियाली शहरको विकास गरिएको छ। दक्षिण पेरुमा रहेको यो ठाउँ रेगिस्थानको बीच मरुभूमिमा पर्दछ जहाँ पानीको सुविधा र हरियाली रुखविरुवाले ढाकिएको छ। रेगिस्थानमा बसाइएको यो शहरको नाम हुआकाचाइना राखिएको छ।यो साउथ अमेरिकाको आइका रेगिस्थानमा रहेको छ। …
चितवनको दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहेलीकै रूपमा छ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित मारिएको उक्त घटना छानबिनका लागि सरकारदेखि आफ्नै पार्टी एमालेसम्मले आयोग बनाए । तर, कुनै पनि आयोगले सुनियोजित हत्या वा दुर्घटना के हो भन्ने किटान गर्न सकेनन् …
सामान्‍य रोग लागेको बिरामी त चाडो भएकै होला। तर कुनै मानिस यस्तो विरामीले ग्रस्त हुन्छन् जुन कहिल्‍यै निको हुँदैन। उनलाई आफ्नै शरीर भद्दा र कुरुप महसुस हुन थाल्दछ। एउटा यस्तै व्यक्ति जसको शरीर भरी ट्युमरै ट्युमर छ। उनको शरीरमा यति धेरै ट्युमर छ की उसको स्वयम आफ्नै छोराले बाबुलाई हेरेर …
पहिलो विश्वयुद्ध हाम्रा लागि के थियो ?
प्रथम विश्वयुद्धको सय वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९१४ को २८ जुलाईमा सुरु भएको यो युद्ध १९१८ को ११ नोभेम्बरमा अन्त्य भएको थियो ।नेपाल कुनै पक्षमा प्रत्यक्ष नलागे पनि नेपाली युवाहरूले बि्रटिस सेनाका तर्फबाट यो युद्ध लडेका थिए । त्यो युद्ध र त्यसको नेपाली समाजमा परेका तत्कालीन असरहरू बहुआयामिक थिए । पछिल्लो कालमा …
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकास्थित धर्मपुरको मानव वस्तीमा रमाउँदै सारस । विश्वमै दुर्लभ मानिने यो जातको पक्षीलाई देखेर पर्यटकहरु औधी खुसी हुन्छन् । उड्न सक्नेमध्ये विश्वमै सबैभन्दा अग्लो पक्षी सारस कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीमा २ सय ५० भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ekantipur
विश्‍वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको १० रोचक तथ्य
१. सन् १९५४ मा भएको भूमिमापनअनुसार सगरमाथा आठ हजार आठ सय ४८ मिटर अग्लो छ। यसैलाई आधिकारिक रूपमा लिइएको छ । सन् १९९९ मा गरिएको भूउपग्रहीय मापनले सगरमाथालाई करिब दुई मिटर अग्लो बताए पनि त्यो विवादित भयो। २. सगरमाथाको चुचुरो जेट विमान उड्ने सबैभन्दा उचाइ (९४४८.८ मिटर) भन्दा केही तलमात्र पर्छ। …
नेपालमा १३ स्मार्ट सिटी र २७ नयाँ शहर बन्दै, कहाँ कहाँ बन्दैछन् ? !! हेर्नुहोस् कतै तपाईको गाउँ,शहर परे की ??केही नमुना हेर्नुहोस
नेपालमा १३ स्मार्ट सिटी र २७ नयाँ शहर बन्दै, कहाँ कहाँ बन्दैछन् ? !! हेर्नुहोस् कतै तपाईको गाउँ,शहर परे की ??केही नमुना हेर्नुहोस सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका आसपासका क्षेत्रमा १३ वटा स्मार्ट सिटी र २७ बटा नयाँ सहर बनाउने भएको छ । प्रत्येक सहरमा १ १ लाख जनसंख्या …
डायनोसरबारे रोचक तथ्‍य यस्तो छ
December 13, 2017	Photography 0
प्राय हामी डायनोसरबारे जति थाहा पाएका छौ, त्‍यो सबै ‘जुरासिक पार्क’ फिल्मका कारण थाहा पाएका छौ। संसारकै सबैभन्दा दर्लभ प्राणी करोडौं वर्ष पहिले पृथ्वीबाट लुप्त भइसकेका छन्। संसारका फरक फरक विशेषज्ञ एवं खोजकर्ताले भने डाइनोसर अहिले पनि जिउँदै रहेको बताउँदै आएका छन्। तर यसको प्रमाण भने उनीहरुले दिन सकेका छैनन्। …